Kuratidza zvinyorwa neelebheri kupatsanura
Kugadziriswa kwemifananidzo ewebhu webcam uye kuburitsa kwezwi uchishandisa MobileNet
Kugadziriswa kwemufananidzo kubva pawebcam uye izwi uye zvinyorwa zvinyorwa uchishandisa MobileNet v muenzaniso pano. Iyo software ichaedza kuti ione izvo zvainoona mu webcam kamera yako yakapfurwa. Edza iyi muenzaniso newebhu browser uye webcam chete. Unogona muenzaniso edza pano.
Dzidzisa neural network kuti isiyanise pakati pekatsi kana imbwa inomira
Dzidza neural network yekusiyanisa pakati pekati kana imbwa inomira. Rovedza neural network pane izvi muenzaniso uri nyore muwebhu browser uye webcam kamera. Edza mufananidzo kupatsanurwa uchishandisa Extraction neNokiaNet. Mumuenzaniso uri pazasi, unogona kuongorora kubudirira kweyekufungidzira.